Cabdiwaaxid Khaliif iyo Cabdillaahi Yusuf
Mushkilad ayaa jirta taas oo ah.
Cabdiwaaxid adiguna caqli yeelan weydey oo odayga adeerkaa ah
aflagaadada iyo been abuurka ka daa garanweydey.
Kuwa London kula joogaana niman rag ah noqon waaye oo waar odayga ka aamus ku oran waaye. haddaba inta aan labadaa mid middood la helin Cabdiwaaxid aamusi maysid..
Bal qiyaas maxaa Cabdiwaaxid kugu salliday ninkaa odayga ah. anigu meel aan u saaro garan waayey.
Oday Cabdillaahi Yusuf wuxuu isu sharraxay in uu noqdo madaxwene somaliyeed. wuxuuna qiyaasay in uu maanta somali meesha ka soo qaadi karo, isagoo kaashanaya wax allaale iyo wixii wanaag ula muuqda. maxaa ku jaban.
Cabdiwaaxid waxaad had iyo jeer caaydaa/cambaareysaa/ku been abuurataa ninkaas odayga ah. intaasna kuma joogtide kuwa kale ayaad ammaantaa.
Ma jiro axad kale oo Soomali ah oo haba yaraatee si badheedhe ah u caaya hoggaamiye kooxeedkooda. waa cabdiwaaxid kaligaa.
Waxaan arkaa kuwo had iyo goor saaran Ninkaa odayga ah.oo kuwoodii xunxumaa ilaahay tusi waayey.
Ma jiro qabiil Somaliyeed oo uu cabdillaahi eed ka galay haba yaraatee. Markaa Cabdwaaxid xaggee ka qaadan tahay.
Waxaad talo ku soo gooysey in Hawiye iyo qolyaha kale oo dhammi iskaashadaan si ay uga hortagaan in ruux Daarood ahi madaxweynenimo ku guulaysto.
Cabdiwaaxid maxaad helaysaa Haddii Cabdillaahi wax waayo oo Muuse yalaxow ama Cabdillaahi A. Caddow Guulaysto. bal geed kasta ismariyoo waxa aad ka helayso noo sheeg.
Hooge maxaa haybtaada kugi salliday?
Waxaa la yidhi.
Xigto Baaniyaaladuba waysugu xarraamaane
Xayawaanku waa kala yaqaan xaynta uu yahaye
Xaaraamiyohow Duqa* maxaad uga xishoonweydey.(bari*)